Ny lakilen'ny Esc dia hanao veloma ny MacBook Pros vaovao. Nahafinaritra izany raha naharitra | Vaovao momba ny gadget
Omaly dia nasehonay anao ny sary voalohany momba ny toa ny efijery mikasika ny OLED amin'ilay MacBook Pro vaovao, efijery iray izay mahatonga ny laharana fahenina amin'ny bokotra hita eo an-tampon'ny fitendry ary aiza no hampiasan'i Apple sensor momba ny dian-tànana izay mamela izahay hamaha ilay fitaovana ho fanampin'ny fanamarinana ny mombamomba antsika rehefa mividy sy mandoa azy ireo amin'ny alàlan'ny Apple Pay. Ity tontonana vaovao mikasika OLED ity Io dia hahafahantsika manamboatra hitsin-dàlana amin'ny rindrambaiko roa sy ny hitsin-dàlana fitendry izay ampiasainay indrindra. Izy io koa no mahatonga ny esc key tsy hanjavona, ilay iray izay ampiasain'ny mpampiasa, indrindra ireo vao manomboka, rehefa tsy fantany hoe taiza izy ireo.
Fa tsy ny rehetra no very. Amin'ny fahatongavan'i macOS Sierra, Apple dia manome antsika ny fahafaha-mandrindra fanalahidy hafa amin'ny klavintsika mba hiasa ho toy io lakile io. Ao amin'ny kinova macOS teo aloha, azontsika atao ny mametra ny lakilen'ny kapila, ny lakilen'ny Control, ny key Option ary ny Command key ho an'ny hafa izay anaovan'izy ireo asa mitovy amin'izany, izany hoe, afaka manova ny lakilen'ny renivohitra isika hanatanterahana ny hetsika CMD ary ny mifamadika amin'izany. Na dia izany aza tsy nisy safidy namboarina indray ny lakilen'ny Esc.
Aorian'ny famoahana ny kinova farany an'ny macOS 10.12.1 afaka mametra-pialana ny lakilen'ny Esc isika hahafahantsika manatanteraka an'io fiasa io amin'ny bokotra hafa amin'ny fitendry. Mety tsara io fiasa io rehefa manomboka tonga eny an-tsena ny MacBook Pros vaovao ary miankina tanteraka amin'ity lakile ity ny mpampiasa, tsy hoe hivoaka amin'ny efijery feno rakitsary YouTube fotsiny izy.
Avereno ny lakilen'ny Esc amin'ny MacBook Pros vaovao
Tsindrio eo Ohatra.
Ao amin'ny kiheba voalohany izay miseho, kitiho ny bokotra Fanovana.
Ankehitriny dia tsy maintsy mifidy izay lakile tianay hampiasaina izy ireo mba hanaovan'izy ireo ny asan'ny Esc.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Ny lakilen'ny Esc dia hanao veloma ny MacBook Pros vaovao. Nahafinaritra izany nandritra ny faharetany